I-Hormone Yokukhula Ye-Anti-Aging eBangkok - I-HGH Therapy eThailand
I-hormone yokukhula yomuntu yokulwa nokuguga ngaphambi kwesikhathi. Imiphumela yezilingo zomtholampilo eThailand.
Ku-1999, i-National Institute in Thailand ekugugeni kushicilele esinye sezifundo zakhe ezibalulekile eziphathelene nokusebenza kokwelapha okufakelwayo ngokusetshenziswa kwe-hormone yokukhula komuntu (HGH) .Inhloso yalolu cwaningo yayinjongo hhayi nje ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ukwelashwa kwama-hormone yi-HGH, kodwa ukuqhuba ucwaningo olulinganiselayo oluzokhulisa ulwazi lwezokwelapha oluhlobene nokusetshenziswa okungenzeka kweHGH ekugugeni. Abahlanganyeli bokufunda bahlukaniswe ngamaqembu amabili. Iqembu lokuhlola lithola izijovo ze-HGH, kanti iqembu lokulawula lithola izijovo ze-placebo.
Ucwaningo olwenziwe kabili-blind HGH
Ucwaningo lwendalo lwaluyimpumputhe emibili, okungukuthi odokotela noma iziguli azi ukuthi ngubani owathola ama-HGH, kepha ngubani owafaka i-placebo. Lolu cwaningo lubuye lube ngumcimbi kazwelonke ohlanganisa imitholampilo evela ngaphesheya kweThailand. Wabamba iqhaza ekuvivinyweni, kokubili iziguli kanye nabanye abanezimpawu zokuntuleka kwe-hormone yokukhula komuntu. Iqembu lezinto zalesisifundo zazibalulekile ngobukhulu futhi likwazi ukuhlinzeka ngamazinga aphezulu okuthembeka ngokukwazi ukuthola ngisho namazinga aphansi okubaluleka.
Injection HGH ihlangene nezinye izinhlobo zokwelapha
Nakuba lolu cwaningo lwaluxhomeke kakhulu ekwelapheni okusetshenziselwa ukusebenzisa i-hormone yokukhula yomuntu, uma kunesidingo, iziguli zathola isifo se-testosterone, i-progesterone ne-estrogen. Inhloso yalolu cwaningo akugcini nje ukukhombisa izinzuzo ezikhona zokwanda kwe-hormone yabantu nokunye ama-hormone, njenge-testosterone, i-progesterone ne-estrogen. Kwakuwukukhuthaza kanye nokuhleleka kokwelapha kwe-HGH injection.
Ukusetshenziswa kwe-HGH kubikwe yisiguli
UDkt. Thierry Hertoghe, washicilela isifundo somtholampilo lapho ukwelapha okwenziwa khona kweHGH hormone kunikezwa iziguli ezihluleka ukukhula komuntu. Lezi ziguli zinebanga elide kakhulu. Isiguli esincane kakhulu sasineminyaka engu-27 ubudala nesiguli esidala kunazo zonke i-82. Ekuqaleni kwesifundo, uDkt. Hertoghe kanye nabalingani bakhe babhala ngokucophelela isimo sabo bonke abagulayo.
Ngemva kokubhala isimo sezempilo seziguli zabo, benza i-hormone injection esikhundleni seHGH phakathi nezinyanga ezimbili. UDkt. Hertoghe wathola iziguli zakhe futhi wacela ukuba bagcwalise ucwaningo abaphendule ngalo ngemiphumela yokwelashwa besebenzisa i-questionnaire echaza ukuthi yiziphi izinzuzo abazitholayo ezigayeni ze-hormone yokukhula kwabantu. Okulandelayo luhlu lwazo zonke imibuzo zohlu lwababuzo kanye nephesenti yeziguli eziphendule ezibonisa ukuthi isimo sabo siphuthukisiwe.
Izimpawu zomzimba zeHGH zokuntuleka nokuguga
Inani elinciphile lobunye ebusweni - 75,5%
I-wrinkles ingenye yezibonakaliso ezibonakalayo kakhulu zokuguga. Isikhumba siqala ukulahlekelwa ukuqina nokuqina kwayo futhi sakha njengemigqa yokukhanya kanye nemibimbi ejulile. Iningi leziguli eziye zazuza ezigayeni ze-hormone yokukhula komuntu, kubonise ukuthi i-HGH ishintshe imigqa emihle noma ibangela ukunyamalala kwemibimbi. Ama-injection nge-hormone yokukhula komuntu akwazi ukucwilisa amangqamuzana esikhumba futhi athuthukise amandla emisipha yobuso, kokubili okudlala indima ekudakeni kwemibimbi.
Isikhumba esinamandla entanyeni nasebusweni - 67%
Lapho amadoda nabesifazane bekhula, imisipha iyancipha ngaphansi kwesikhumba, ibangele ukukhululeka kwesikhumba kumisipha. Cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zeziguli zikaDkt. Hertoghe zibike ukuthi ngenxa yendlela yokwelashwa ebizwa ngokuthi i-hormone yokukhula komuntu uye wehlisa isikhumba esikhwameni nasobusweni. Izifo zikaHGH zakwazi ukukhulisa ithoni yomzimba womzimba, okwaba yinzuzo yakhe.
Imisipha eyengeziwe i-60.7%
Iziguli ezingaphezu kweyisithupha kwabayishumi ezifakwe ekutadisheni kukaDkt Hertoghe, zingakapheli izinyanga ezimbili ze-HGH injection, ithoni ye-muscle yashintsha. I-hormone yokukhula komuntu yakwazi ukwanda, njengezwi le-muscle, nosayizi we-muscle ngokushintsha ukubukeka kokubukeka kwemisipha namandla abo. Uma iziguli zinamazinga aphilile okuthiwa i-hormone yokukhula komuntu, imisipha ithola amandla engeziwe kanye nophethiloli ngesimo se-insulin-like factor 1, esenza ngcono impilo ye-muscle, ikakhulukazi ngokuhambisana nokuzivocavoca nokudla okuwusizo.
Izinga elingaphansi lamafutha omzimba - 48%
Cishe isigamu seziguli ezithathile kulolu cwaningo njengomphumela we HGH injections ushintshe inkomba yomzimba womzimba. I-hormone yokukhula komuntu idlala indima ebalulekile ekugulweni kwegazi, okuthinta kakhulu indlela imisipha kanye nokubeka amafutha ezilwane emzimbeni, kodwa ngokuyinhloko ezungeze esigabeni sendawo. Isibindi siphenduka i-HGH ibe yi-IGF-1, futhi sinamandla okwehla izicubu ezinamafutha angasempilo futhi ziguqule amandla engeziwe!
Isikhumba esinamandla kakhulu, esinamandla kuya ku-34.5%
Abangaphezu kwesithathu kwabaphenduli baphawule ushintsho olubalulekile lethoni yesikhumba. Lezi ziguli zathola ushintsho kwisakhiwo sesikhumba. Umphumela uba ukungezwani kwemisipha kanye nokwanda kwama cell hydration, hhayi nje imibimbi kanye isikhumba sagging banomkhuba wokunyamalala, kodwa lezi zinguquko zemizimba nazo zandisa ukwandisa ukuguquguquka kanye nomthamo wesikhumba. Amaseli esikhumba njenganoma yimaphi amanye amangqamuzana emzimbeni adinga ukusebenza kahle okufanelekile kwe-hydration. Amaseli esikhumba awafani. Umehluko wukuthi isikhumba singumzimba ohlale uvezwe engcindezini yangaphandle, njengokukhanya kwelanga, izinga lokushisa nomoya. I-hormone yokukhula yomuntu ingavikela isikhumba esakhiweni futhi ivimbele ukungena emanzini, okusiza isikhumba ukuba sihlale siqinile, siqine futhi simelane nomonakalo.
Ukwandisa izinwele zezinwele - 28,1%
Ngaphezu kwengxenye yekota kwabathintekayo kulolu cwaningo babhekene nezinguquko ezinhlathini zabo ngenxa yokuvezwa kwe-hormone yokukhula komuntu. Nakuba le miphumela emihle ingcono kakhulu, ingxenye ebalulekile kulabo abathatha ukwelashwa kwe-HGH, cabangela izinwele ezinempilo ngenxa yempatho. Lapho amangqamuzana esikhumba aphinde avuselele futhi abuye avuselele, abuye athuthukise impilo yezinwele zezinwele. Izinwele zezinwele kumane nje uhlobo olwenziwe lukhuni lwamangqamuzana esikhumba ukuze impilo yesikhumba ibambe iqhaza ngqo empilweni yezinwele.
I-germanosilicate engqondweni nangokomzwelo isebenzisa i-hormone therapy, ukukhula komuntu
Ukwanda okuvamile kokulinganisela ngokomzwelo - 71,4%
Cishe izingxenye ezintathu zeziguli zathola ukuthuthukiswa koMbuso jikelele ngokomzwelo. Ukuntuleka kwe-hormone yokukhula komuntu isikhathi eside kwaholela ekunciphiseni impilo yengqondo futhi imiphumela yalolu cwaningo inikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi ukuntuleka kwe-hormone yokukhula komuntu kungadala impilo yengqondo. Iziguli eziningi, i-HGH ikwazi ukwenza ukuphila kwansuku zonke kube lula nokubekezela. Lokhu kuyingxenye ngenxa yezinguquko ekuziboneleni okubonakalayo okuvela ekuguqulweni komzimba okwenzeka emzimbeni, kepha i-HGH nayo ikwazi ukuthuthukisa ubuchopho bezobuchopho!
Amazinga wezinga elandayo - 86.8%
Phakathi kweziguli ezihlanganyela kulolu cwaningo. Thierry, cishe i-9 kuzo zonke iziguli ze-10 zathola amazinga engeziwe wezamandla. Iningi leziguli ezibhekana nezinkinga, ukulahlekelwa kwe-HGH kubonakala njengokukhathala. I-HGH iyakwazi ukuvuselela umzimba, ikusize Uhlale uqaphile futhi uzimisele ngokwengeziwe ukuthatha usuku. I-hormone yokukhula yomuntu iyakwazi lokhu ngezizathu eziningi. Esinye sezizathu ukuthi kwandisa ikhono lomzimba lokubona okuphelele ekuvuselelweni ngenxa yokulala. Esinye isizathu ukuthi ukubola kwamafutha ezilwane, ngenxa ye-IGF-1, kunikeza amazinga aphezulu emzimbeni wezinga lamakhemikhali.
Ukuqina komzimba okwandayo - 86,04%
Ukwengeza ukuphakamisa amazinga ajwayelekile amandla, i-hormone yokukhula komuntu iyakwazi ukwandisa ikhono lomzimba lokusebenzela kulabo abahluphekayo laleli hormone.
Ngaphezulu kwe-85% yabaphenduli ekuvivinyweni komtholampilo. U-Thierry wabika ukuthi ngenxa ye-HGH injection iye yandisa ikhono lokwenza umzimba nokusebenza ngokomzimba. I-hormone yokukhula komuntu yembula amazinga akhula okuyisimetabolomini esinikeza imisipha ibe namandla. Lokhu kwanda kwamandla kuthuthukisa ikhono lomzimba lokulwa namazinga akhulayo okwenziwa ngokomzimba ngaphezu kokunyuka kokusetshenziswa kwalo msebenzi. Futhi, ukwelashwa kwe-hormone esikhundleni sokumisa i-HGH kwandisa isilinganiso lapho umzimba uthola khona ngemva kokuzivocavoca nokulimala. Ukuvuselela umsebenzi owandayo phakathi namahora okulala kusho ukuthi Ungasebenzisa ngokuqinile futhi kaningi ngaphandle kokuzwa ukhathele.
Awukwazi ukulala ukuphumula ngemiphumela emibi embalwa - 82,5%
Ukwelapha okushintshe nge-hormone yokukhula komuntu kuthuthukisa ikhono lomzimba lokuthola okuningi ebuthongweni bakhe. I-HGH ibanjwe ngokuyinhloko ebusuku kanti lokhu kwenzeka lapho umzimba uthola ukukhathala nokugqoka, ukulila okwanele emini. Ngeziguli ezingenayo i-HGH, umzimba awunazo izinzuzo ezigcwele zokulala okunempilo futhi ekugcineni uhlupheke kuwo. Nakuba okuwusizo kakhulu kufanele kube nokulala ebusuku ngamahora ayisishiyagalombili, iziguli ezinezinga eliphilile le-HGH, uma kunesidingo, zingasebenza kahle ngokulala kancane. Ngaphezu kwalokho, iziguli ezinenkinga yokulala ngokulinganisela, i-HGH ingasiza ukubuyisela imikhuba yokulala enempilo, nokubuyisela isigqi somzimba sendawo.
Ikhono elikhulayo lokumelana nokucindezeleka - 83,7%
Ukucindezeleka kungenye yezinto ezivusa amadlingozi ezweni lanamuhla. Ukukhathazeka nokucindezeleka kungavimbela yonke into ekuthokoziseni ekuziqapheleni, okwandisa ingozi yokugula ngokomzimba njengokugula kwesifo senhliziyo, ukulala nokulala. Yiba ngaphezu kwe-4 yeziguli ze-5 kulolu cwaningo ezinyangeni ezimbili zokunakekelwa kwe-HGH kwehla izinga lokucindezeleka. Iziguli ezinokuntuleka kwe-HGH zavame ukwandisa amazinga e-cortisol nokunciphisa amazinga wamandla, okwenza kube lula ukucindezeleka.
Sincoma ukuthi futhi ufunde:
HGH ukulahlekelwa isisindo Thailand | Sebenzisa i-hormone yokukhula yabantu ukulahlekelwa amafutha eBangkok
Qala ukuthenga manje!